दराज बिक्रेता कसरी बन्ने ? एकै क्लिकमा अनलाइन व्यवसाय गर्नुहोस - Daraz Life
दराज बिक्रेता कसरी बन्ने ? एकै क्लिकमा अनलाइन व्यवसाय गर्नुहोस02878
Umanga Khatiwada April 23, 2020 3:34 PM May 5, 2020
दराज बिक्रेता कसरी बन्ने ? अब एकै क्लिकमा बिक्रेता बनि अनलाइन व्यवसाय गर्नुहोस ।
दराजमा बिक्रेता बन्न निक्कै सजिलो छ । केवल तीन स्टेपमा दराज बिक्रेता बनेर तपाईले पनि आफ्नै अनलाइन पसल खोल्न सक्नुहुनेछ । दराज मार्फत तपाईले हरेक महिना नेपालका सबै कुनामा रहेका ७ लाख भन्दा बढि उपभोक्ताहरु माझ आफ्नो पहुँच पुर्याइ व्यापार बढाउन सक्नुहुनेछ ।
Read in English: How to Be A Daraz Seller
दराज बिक्रेता किन बन्ने त ?
नेपालमा इ–कमर्सका सम्भावनाहरु ठुलो मात्रामा रहेका छन् । देश डिजीटल यूग तर्फ लागीसकेको छ । र साथसाथै बढ्दोे विश्वसनीयताका र जनचेतना कारण इ–कमर्सको उदय निश्चय छ । अनलाइन किनमेल गर्न निकै सरल छ । उपभोक्ताहरुले केवल इन्र्टनेट र फोन अथवा कम्प्यूटरको साहयताले किन्न चाहेको सामानहरु सजिलै सँग खोज्न, रोज्न सक्दछन् र आफ्नो घर सम्मै डिलिभर गराँउन सक्दछन् ।
दराजको लागि, इ–कमर्स वातावरणमा दराज बिक्रेताहरुको निकै ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ ।दराजसँग ४००० भन्दा बढी विक्रेता छन्, र भरतपुर, पोखरा, वीरगन्ज, जनकपुर, विराटनगर, र बुटवल जस्ता शहरहरू बाट बिक्रेताहरु दराज मा समावेश गर्न जारी नै छ ।
दराजमा बिक्रेता हुनुका फाइदाहरु
– Bhawana Upreti, Creative Touch
दराज सगँ तपाईले उपयुक्त एक्सपोज्यरपाई नेपालका हरेक कुनामा रहेका उपभोक्ताहरु सामु आफ्नो पहुँच पुर्याउन सक्नुहुनेछ। र यसरी तपाईले सजिलै व्यापार बढाउन सक्नुहुनेछ ।
तपाईले दराज सगँ नयाँ र उत्कृष्ट प्रणालीहरुको उपयोग गर्नपाउनुहुनेछ । उक्त प्रणालीहरु इ–कमर्स संसारका चिनियाँ महारथी अलिबाबा सगँ मिलेर बनाइएको हो । सन् २०१८ मा अलिबाबाले दराजलाई आफ्नो अन्तर्गत लिएको हो । उक्त प्रणालीहरु द्वारा तपाईले आफ्नो सफलता आफै सिर्जना गर्नसक्नुहुनेछ ।
– Jigme Sherpa, KTM City
दराज ग्लोबलका सि.इ.ओ., ब्यिार्केे मिक्खेल्सन, भन्छन:
“हाम्रो लागि, सबैभन्दा उत्कृष्ट बिक्रेता भनेको बिक्रेतानै आफै हो – दराज हैन। यसकारण हामी बिक्रेताहरुलाई स्वतन्त्रताको साथ बिक्री गर्न पाउने सबै औजारहरु उपलब्ध गराउँदछौँ। हाम्रो काम भनेको यस्तो औजार र नियन्त्रण प्रणालीहरुको विकास गर्नु हो जसले हरेक लेनदेनमा उपभोक्तालाई सत्प्रतिशत सुरक्षित राख्दछन्।”
दराजको बिक्रेता बन्ने तरिका यस प्रकार छन्ः
बिक्रेताका रुपमा दर्ता गर्न उक्त साइटमा जानुहोसः https://bit.ly/2rVwe3R
दर्ता भइसके पछि यहाँहरुले उत्पादनहरु सूची गर्नहोस । अब दर्ता र सूची गरीसके पछि यहाँहरुले उत्पादनहरु बिक्री गर्नसक्नुहुनेछ । यस पश्चात यहाँहरुले छिट्टै उपभोक्ताहरु मार्फत समानहरुको अर्डरहरु प्राप्त गनुहुनेछ । उक्त अर्डरहरु यहाँहरुले बिक्रेता सेन्टर (seller center) प्रयोग गरी व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ ।
दराज द्वारा यहाँहरुले हरेक महिना ७ लाख भन्दा बढि नेपाली उपभोक्ताहरु माझ आफ्नो पहुँच पुर्याउन सक्नुहुनेछ । साथसाथै दराजको पुरै टिम दराजको साइट र एपमा नयाँ उपभोक्ताहरु आकर्षित गर्न सधैं समर्पित छन् ।
BeaDaraz Sellerdaraz seller account registrationdaraz seller app downloaddaraz seller helplineEarn money in NepalEarn money sitting at homeHow to earn money onlineHow to earn money online in Nepalmoney making apps in Nepalmoney making websites in nepalOnline shoppingSeller Center Daraz Nepal
Previous ArticleThe Unsung Heroes during the COVID-19 PandemicNext ArticleHow to Improve Your Mobile Phone Business Online